Wamkelekile kwiGerês "imbono eluhlaza" - I-Airbnb
Wamkelekile kwiGerês "imbono eluhlaza"
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguCarlos & Cristina
UCarlos & Cristina yi-Superhost
Indawo encinci eyenziwe ngenjongo yokonwabela yonke indalo engqongileyo yommandla, inikwe ulwakhiwo oluqinileyo oluxhonywe ludityaniswe nelinye lemithi yomnquma emihle kwipropathi, ubukhulu becala ngamaplanga njengesiseko sokwakha, ukuze kudalwe amava. yodwa kwabo bafuna indawo enoxolo nendalo.
Ifanele abantu aba-2, le ndawo ikwipropati ebekwe kwidolophana encinci yaseVentosa, indawo yase-Eirós, kunye neembono phezu komlambo we-caldo kunye ne-landscape emangalisayo ejikeleze i-Serra do Geres. Ukuba uyayithanda indalo kunye noxolo, ungawufumana lo moya kwesi sithuba sincinci…!
4.86 · Izimvo eziyi-123
Indawo entle kakhulu, imizuzu emi-3 nje ukusuka kumlambo i-caldo, iibhulorho kunye ne-marina, kunye nomgama omfutshane ukusuka elunxwemeni lomlambo kunye neziko lelali yaseGeres.
Ngommandla we-600m2, apho le ndlu ikhoyo, enokuthi ibambe ukuya kuthi ga kwi-2/3 yabantu (isibini esi-1 kunye nomntwana ukuba kufanelekile) kunye ne-barbecue, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iindawo eziluhlaza, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Carlos & Cristina
Izimvo eziyi-1 742
Inombolo yomthetho: 98398/AL